कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४६ दिनयताकै उच्च — Sanchar Kendra
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४६ दिनयताकै उच्च
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट ५५ जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमणबाट एकैदिन मृत्यु हुने यो संख्या डेढ महिनायताकै उच्च हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यससँगै कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या १० हजार ९३ पुगेको छ ।
यसअघि गत असार ९ गते एकैदिन ८१ जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता कोरोना संक्रमणबाट हुने मृत्यु संख्या लगातार घटेर असार २९ गते १२ जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
त्यसपछि भने संक्रमितको मृत्यु पुनः बढ्दै गएको छ । साउन १ गते एकैदिन ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता दैनिक मृत्यु हुने संक्रमित संख्या १६ देखि ३७ को बीचमा रहेको थियो । तर आइतबार एकैदिन ५५ जना संक्रमितको मृत्यु भएपछि दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।
शनिबार भने कोरोना संक्रमणबाट १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर उत्कर्षमा रहेका बेला जेठ ५ गते एकैदिन सबैभन्दा बढी २४६ जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो ।
किन बढ्यो मृतक संख्या ?
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप पनि बढ्दै गएको छ । अस्पतालमा जटिल अवस्थाका संक्रमितको संख्या बढेकाले मृत्यु पनि बढेको संक्रामक रोग विशेष डा. शेरबहादुर पुनले बताए ।
‘यो भेरियन्ट धेरै संक्रामक छ । सामान्य हो भन्दै घर बसेकाहरु धेरै जटिल बनेपछि मात्रै अस्पताल आउने गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा संक्रमितलाई बचाउन गाह्रो भएको छ । त्यसैको कारण मृत्युको संख्या बढेको हुन सक्छ’ डा. पुन भन्छन् ।
पहिलो र दोस्रो लहरमा अपनाइएको उपचार पद्धतिको समीक्षा गर्दै उपचार पद्धतिलाई नै परिमार्जन गर्न तर्फ सोच्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था आएको उनको बुझाइ छ । लामो समयसम्म उपचार पाउँदा पनि केही संक्रमितहरुलाई बचाउन नसक्नुले चिकित्सकहरुलाई यसतर्फ सोच्न बाध्य बनाएको उनको तर्क छ ।
त्यस्तै शेर बहादुर देउबा सरकारले चैतसम्म सबै नेपालीलाई कोरोना खोप दिने घोषणा गरेको छ। गठबन्धनका तर्फबाट आज सरकारका साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै चैतभित्र सबैलाई निशुल्क रूपमा कोरोना खोप दिइने घोषणा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रीहरू पनि उपस्थित थिए। सरकारका साझा कार्यक्रम कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेका थिए। खड्काका अनुसार संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा चैतसम्म सबै जनतालाई निशुल्क रूपमा कोरोना खोप दिने उल्लेख छ।
यस्तै नेपालमै कोरोना खोप उत्पादनका लागि पहल गर्ने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीजस्ता सीमामा देखिएका समस्या कुटनीतिक तवरबाट हल गर्ने पनि कार्यक्रममा समावेश छ। यस्तै जसपाको मागअनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएका अनियमितताबारे सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ। केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको बाहिरिएको थियो।
भारत, बेलायत र अमेरिकामा राजदूत सिफारिस, को कहाँ पुगे ?